Onye na -ahụ maka ahụike Europe: Emela njem n'agwaetiti Gris!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Greece » Onye na -ahụ maka ahụike Europe: Emela njem n'agwaetiti Gris!
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Greece • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Gris adọtala ọtụtụ ndị ọbịa n'agwaetiti 13 ya, gụnyere Mykonos na Santorini, na-akwalite ha dị ka ebe "enweghị COVID", mana ugbu a, enwere ike ịme njem na mpaghara ahụ n'ụzọ nkịtị naanị n'ihe egwu.
Ndị njem ezumike dọrọ aka ná ntị ka ha zere agwaetiti Aegean.
Mmụba nke ikpe COVID-19 kọrọ na agwaetiti ndị njem nlegharị anya Greek.
N'ime ụbọchị 14, achọpụtara ihe karịrị 500 COVID-19 ikpe ebe ahụ.
The Ụlọ Ọrụ Europe Maka Mgbochi Ọrịa na Njikwa (ECDC) adọla ndị na-eme ezumike aka na ntị ka ha ghara ịga na agwaetiti Aegean nke ndịda Gris mgbe ndị isi kwuchara mmụba n'okwu COVID-19 ebe ahụ.
Greece adọtala ọtụtụ ndị ọbịa n'agwaetiti 13 ya, gụnyere Mykonos na Santorini, na-akwalite ha dị ka ebe "enweghị COVID", mana ugbu a, enwere ike ịme njem na mpaghara ahụ n'ụzọ nkịtị naanị n'ihe egwu.
Maapụ njem ECDC bụ usoro nwere ọkwa ise nke agba agba na-acha ọbara ọbara-nke bụ ka esi ese agwaetiti ndịda nke Oké Osimiri Aegean site taa-pụtara na n'ime ụbọchị iri na anọ, achọpụtara ihe karịrị narị ọrịa ise nke ọrịa dị ize ndụ. Ebe ahụ.
Onye na -achị Europe: Emela njem n'agwaetiti Gris!
Gọọmentị Gris mepere agwaetiti ndị njem nlegharị anya n'oge opupu ihe ubi nke 2021 na -enwe olile anya iwughachi akụ na ụba mpaghara mgbe oge mmachi nke mgbochi njem.
Ọ bụ ezie na nde ndị njem nde 31.3 gara Gris na 2019, ọnụọgụ ahụ gbadara site na 76.5% ruo naanị nde 7.4 na 2019, dị ka ụlọ ọrụ nke Association of Business Tourism Greek si kwuo.
Ndị ọrụ Gris ka ga -atụ ụjọ n'agbanyeghị, Manolis Markopoulos, onye isi otu Rhodes Hoteliers 'Association kwuru na ụlọ ọrụ njem na -echere ahịa ka ha meghachi omume na atụmatụ ECDC emelitere tupu ịzaghachi.
Ebe nlegharị anya Greek ọzọ a ma ama, agwaetiti Krit, nwetara ọnọdụ yiri nke a "dị oke egwu" otu izu gara aga.